Ndị na -emepụta ihe na ndị na -ebubata igwe na -agbagharị agbagharị - China Q Switched Nd Yag laser machine Factory
Kachasị arụ ọrụ Q agbanwere ND YAG Laser Machine Ọgbara ọhụrụ enweghị mmetụta ọ bụla
NBW-1000 na-anabata mmetụta ọgbụgba ọkụ laser na ozizi nke mmịkọ nhọrọ. Mgbe ahụ ọkụ ọkụ laser pulses
ga -arụ ọrụ na anụ ahụ ụcha, mgbe ujo laser gasịrị, anụ ahụ ụcha ga -agbasa ngwa ngwa. Ntụrụndụ okpomọkụ
oge laser pulse dị mkpụmkpụ karịa nke melanoma na egbugbu, yabụ, anụ ahụ na -emepụta ụcha ga -ewepụta
ebili mmiri oscillation wee mebie mgbe ị mụsịrị ike laser. Agba a kewasịrị ekewa
A ga -ewepu granule na mpụga ahụ site na metabolism na phagocytosis nke macrophages.
N'okwu a, a ga -ewepụ pigmenti ahụ. Ka ọ dị ugbu a, eriri laser nwere ike banye n'ime akwa corium iji rụọ ọrụ
anụ ahụ, mee ka mweghachi sel dị ngwa iji nweta nsonaazụ ndị a: iwepụ ndọlị, ịchacha anụ ahụ,
rejuvenation akpụkpọ na àgwà akpụkpọ na -emeziwanye.
Vertical Q Switch Nd Yag Laser Tattoo Removal Device, Ngwa Mma Ahụike
Nubway Kere ọhụrụ 1-10Hz mgbanwe q-switch nd yag laser tattoo removal machine maka ọrịre
Korea Arm Q gbanwere igwe na -ewepu tattoo Tat Yag Laser Wepụ ndị ọrụ Melanin
NBW-1000 na-anabata mmetụta ọgbụgba ọkụ laser na ozizi nke mmịkọ nhọrọ. Mgbe ahụ ọkụ ọkụ laser ọkụ dị elu ga -arụ ọrụ na anụ ahụ ụcha, mgbe ujo laser gasịrị, anụ ahụ na -acha ka ga -agbasa ngwa ngwa. Oge ezumike ọkụ ọkụ nke akwara laser dị mkpụmkpụ karịa nke melanoma na egbugbu, yabụ, anụ ahụ nwere agba ga -ewepụta ebili mmiri oscillation wee mebie wee gbasaa ike laser. A ga -ewepụta mkpụrụ ndụ ihe nketa nke kewara ekewa na mpụga ahụ site na metabolism na phagocytosis nke macrophages. N'okwu a, a ga -ewepụ pigmenti ahụ. Ka ọ dị ugbu a, ụdọ laser nwere ike banye n'ime akwa corium iji mee ka anụ ahụ rụọ ọrụ, mee ka mkpụrụ ndụ dịghachi ọhụrụ iji nweta mmetụta ndị a: iwepụ ndọlị, ịchacha akpụkpọ ahụ, ime ka akpụkpọ ahụ dị mma na ịdị mma akpụkpọ ahụ.
Akwa ike Q agbanwere igwe laser laser Y YAG nwere sistemụ nnyefe aka nke ejikọtara ọnụ
Na -enweghị mgbu Q agbanwere ND YAG Laser Machine Pigmentation Equipment
CE kwadoro ire ọkụ ọkụ kwụ ọtọ q-switched nd yag laser tattoo machine maka mwepụ ụcha
EC na -anabata pigments egbugbu varicose veins laser ọgwụgwọ q gbanwere na yag laser
NBW-1000 na-anabata mmetụta ọgbụgba ọkụ laser na ozizi nke mmịkọ nhọrọ. Mgbe ahụ ọkụ ọkụ laser pulsesga -arụ ọrụ na anụ ahụ ụcha, mgbe ujo laser gasịrị, anụ ahụ ụcha ga -agbasa ngwa ngwa. Ntụrụndụ okpomọkụoge laser pulse dị mkpụmkpụ karịa nke melanoma na egbugbu, yabụ, anụ ahụ na -emepụta ụcha ga -ewepụta ebili mmiri oscillation wee mebie mgbe ị mụsịrị ike laser. Agba a kewasịrị ekewaA ga -ewepu granule na mpụga ahụ site na metabolism na phagocytosis nke macrophages. N'okwu a, a ga -ewepụ pigmenti ahụ. Ka ọ dị ugbu a, eriri laser nwere ike banye n'ime akwa corium iji rụọ ọrụanụ ahụ, mee ka mweghachi sel dị ngwa iji nweta nsonaazụ ndị a: iwepụ ndọlị, ịchacha anụ ahụ, rejuvenation akpụkpọ na àgwà akpụkpọ na -emeziwanye.
Ọkachamara Laser Tattoo Removal Machine Mma Salon Equipment CE egosi
Nubway kachasị ọhụrụ 1-10Hz na-agbanwe q-switch nd yag laser tattoo equipment maka ụlọ ọgwụ
Akụrụngwa na -ewepu egbugbu agba niile, S Switched Nd Yag Laser System 1Hz 2Hz 5Hz
2021 kacha ọhụrụ CE kwadoro Korea laser pico laser q switch nd yag laser maka mwepụ egbugbu Hollywood peel pigmentation skin rejuvenation
Ahịrị Anya ahụ na ihu iwepụ Tattoo Q-switched ND: YAG laser
Ahụike ahụike Q agbanwere igwe laser laser Y YAG nwere nhọrọ aka abụọ